Kulankii Qoorqoor, Guudlaawe iyo Madaxweynayaashii hore | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankii Qoorqoor, Guudlaawe iyo Madaxweynayaashii hore
Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle, Qoorqoor iyo Guudlaawe, ayaa ogolaadday in ay caddeeyaan muwqifkooda ku aaddan muddo kordhinta, kana sheegaan shir weynaha beelaha Hawiye oo dhawaan ka dhici doona caasimadda.
MUQDISHO,Soomaaliya - Waxaa xalay kulan albaabadu u xiran yihiin magaalada Muqdisho ku yeeshay, Madaxweynayaasha Maamul goboleeyada Galmudug iyo HirShabeelle, iyo Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya.
Kulanka oo daba socday shir ka sii horreeyay oo Golaha Midowga Musharixiintu la yeesheen Axmed Cabdi Kaariye ‘Qoorqoor’, ayaa la qorsheeyay in kaliya is araggaan loo daaayo, Madaxweynayaahii hore iyo hoggaamiyayaasha Maamullada Galmudug iyo HirShabeelle.
Cali Guudlaaw, Axmed Qoorqoor, Xasan Sheekh iyo Sheekh Shariif, ayaa si adag uga dooday, sababta ku qasabtay Guudlaawe, inuu soo dhaweeyo waraaqda muddo kordhinta ee lagu qoray Madaxtooyada Soomaaliya, waxaana ugu danbeyn la isla gartay khatarta ay leedahay muddo kordhinta loo sameeyay Farmaajo.
Qorshuhu wuxuu ahaa in marka kulanku dhamaado, la soo saaro war murtiyeed wadajir ah oo ay ku mideysan yihiin Maamul goboleeyada Galmudug iyo HirShabeelle iyo Golaha Midowga Musharixiinta, hayeeshee, Qoorqoor ayaa soo jeediyay in ay marka hore labada Madaxweyne ku laabtaan Farmaajo, kulana taliyaan inuu ka laabto muddo kordhinta.
Cali Guudlaaw iyo Qoorqoor, waxa ay sheegeyn in mowqifkooda diidmada muddo kordhinta, ay ka hor sheegi doonaan shir weynaha beelaha Hawiye, kaas oo loo ballasan yahay Isniinta soo socota.
Waxaa si xooggan hadda magaalada Muqdisho looga dareemayaa, qaban qaabada shirkaas, waxaana la aamin san yahay inuu yahay fursaddii ugu danbeysay oo la siinayo, Cali Guudlaaw iyo Qoorqoor, oo dad badan rumeysan yihiin in ay wali ku daaban yihiin Farmaajo.